भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरसँगै सांसद रौनियार पदबाट स्वतः निलम्बित ! - भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरसँगै सांसद रौनियार पदबाट स्वतः निलम्बित !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १९ आश्विन, 05:14:30 PM
काठमाडौं । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै सांसद रौनियार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
रौनियार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघिसम्म पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए । सांसद निर्वाचित भएसँगै उनले अध्यक्ष पद छाडी छोरालाई जिम्मा लगाएका हुन् ।
२०७५, १९ आश्विन, 05:14:30 PM